मधेशी फोरम र नयाँ शक्तिको एकीकरण यी कारणले रहस्यमय ! « Nepal Bahas
मधेशी फोरम र नयाँ शक्तिको एकीकरण यी कारणले रहस्यमय !
भारतमा पक्राउ गराउने सुराकीदेखि गौर नरसंहारको दोष लगाउँदै परम दुश्मन बनेका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईका बीच लगनगाँठो कसिदिने शक्ति
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७६, बिहीबार १०:२०
मधेशी जनअधिकार फोरम र नयाँ शक्ति दुवै पार्टीले आफ्ना पहिचानगत नामलाई तिलाञ्जली दिएर ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ को नयाँ न्वारानका साथ बैशाख २३ गते सोमबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा विधिवत एकीकरण गर्नुका पछाडि स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा पनि तिकडम, इन्द्रजाल र तिलश्मी निहित रहेको पर्यवेक्षकहरूको चर्चा छ ।
यसो हुनुको कारण पार्टी एकीकरणको आधार नेपाललाई ७ प्रदेशको संघात्मक राज्य व्यवस्थाबाट ११ प्रदेशमा पु¥याउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था मूख्य छन् । यी दुई प्रतिबद्धताका कारण यो एकता रहस्यमय बन्न पुगेको हो । त्यसो त पहिले ‘मधेशी’ शब्द राख्न मरिहत्ते गर्ने अन्य पार्टीहरूले पनि आजकाल यो शब्दलाई तिलाञ्जली दिनु महत्वपूर्ण नभए पनि अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
डा. बाबुरामले मुमाराम, हरेराम, रामेश्वर आदि ३२ धातुका ‘आयाराम गयाराम’ लगायतका बटुलेर पार्टीको न्वारान गरे, ‘नयाँ शक्ति’ । बाबुरामका आयाराम गयारामहरू केही समयपछि उनीबाट क्रमशः टाढिए । सत्ताको ग्यालरी, कोठाचोटामा रजगज गरिसकेका, राज्यको सुविधामा पालिएर निस्केका, अघाएका तर अझै क्षुधाग्रस्त वा असन्तुष्ट सुविधाभोगी दिशाहिन ‘पुराना पापी’को जमघटजस्तो लाग्ने ‘नयाँ शक्ति’ ले गत चुनावमा शर्मनाक हार पराजय भोग्नुप¥यो । स्वयं बाबुरामलाई गोरखाबाट निर्वाचित हुन कांग्रेसले चुनाव क्षेत्र खाली राखेर काँध नहालिदिएको भए जमानत जफत हुने अवश्यम्भावी थियो ।
एउटा विदेशी अनलाईन पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा बाबुराले कहाँसम्म भनेका थिए भने, “हामी नेपालको राज्यसंरचना बदल्न प्रतिबद्ध छौं । म त फेरि भन्छु, वर्तमान राज्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर नयाँ राज्य स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो” (Our ultimate goal is to overthrow the old state replacing it withanew one. …In our case it has meant cutting up the state part by part, in fact we are devouring it part by part….) । यो नयाँ पार्टी गठनबाट उनको सो भनाईलाई पुनः सम्झाएको छ ।
दोस्रो रहस्य पूर्वसभामुख तथा पोहोर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भक्तपुर–२ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भएका दमननाथ ढुङ्गानाको अस्वाभाविक उपस्थिति, उनको भाषणमा नवोदित पार्टीको प्रशंसा तथा सत्तारुढ नेकपा र आफ्नै पार्टी कांग्रेसको आलोचनालाई लिएर भएकोले ढुङ्गाना पनि सोही पार्टीमा प्रवेश गर्नसक्ने अनुमान गरिन्छ । लाजिम्पाटस्थित सांग्रिला होटलमा उपेन्द्र यादवको मधेशी फोरम र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिलाई २ पटकभन्दा बढी जुटाएर एकीकरण वार्ता गराउने र अघिपछिका प्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दमन ढुङ्गानालाई यो एकता गराउनु के जरुरत थियो ? यो नै तिलश्मीजन्य प्रश्न भएको छ । तर कांग्रेसबाट उनका गतिविधिबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
दुवैजना माओवादीमै रहँदा (द्वन्द्वकालमा) माओवादी नेताहरूलाई भारतमा पक्राउ गराउने सुराकीदेखि गौर नरसंहारको दोष आपसमा लगाएर परम दुश्मन भएका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईका बीच लगनगाँठो कसिदिने शक्ति को हो ? यो निकै खोजीको पहेली भएको छ । भट्टराई नवअवतारी पार्टीमा हजारभन्दा बढीको संख्यामा हुने प्रतिनिधिहरूको ‘संघीय परिषद’ का अध्यक्ष रहनेछन् भने यादव तीनसयभन्दा बढी सदस्य रहने केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्ष हुनेछन् । तर यही नाममा अर्कै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेकोले वैधानिक समस्या उत्पन्न भएको छ ।
यो नयाँ पार्टीमा २५ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । भट्टराई र यादवपछि बरियता क्रममा अशोक राई पर्नेछन् । राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सहअध्यक्ष बनाइएको छ । सातजना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश नं. २ का मूख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतलगायत नवराज सुवेदी, पर्शुराम खापुङ्ग, हिसिला यमी, रेणुकुमारी यादब, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ र हेमराज राई छन् । ३ जना महासचिवमा गंगानारायण श्रेष्ठ, रामसहायप्रसाद यादव र रणध्वज कन्दङ्वालाई राखिएको छ भने तीनैजना उपमहासचिवमा दानबहादुर विश्वकर्मा, डम्बर खतिवडा र प्रकाश अधिकारी रहेका छन् । ४ जना सचिवमा मोहम्मद इस्तियाक राई, दुर्गा सोब, पर्शुराम बस्नेत, प्रशान्त सिंह छन् । कोषाध्यक्षमा विजयकुमार यादव रहेका छन् ।
माओवादी राजनीति गर्दा उपेन्द्र यादवलाई त्यसका अन्य नेताहरूले शंकास्पद नेत्रले हेर्ने गर्थे । त्यसका नेताहरू ‘भूमिगत’ रुपले दिल्लीमा बसेका बेला त्यहाँको तिरागढी भन्ने ठाउँमा सुरेश आले मगर, मातृका यादवसहित यिनलाई पनि २०६१ कार्तिकमा दिल्ली पुलिसले एक साँझ पक्राउ ग¥यो । प्रचण्ड पनि पक्राउमा पर्न सक्थे, तर संयोगले बाँचे । त्यही पक्राउपछि सुरेश र मातृकालाई भारतले नेपाल सरकारसमक्ष सुपुर्दगी ग¥यो । यादवलाई चाहिँ केही समयपछि इन्डियामै रिहा गरेपछि यिनी धेरै समय उतै हराए । माओवादीभित्र गम्भीर आशंका उब्जेको थियो, प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्ने लक्ष्यले गरिएको सो एक्सनमा उपेन्द्र यादवको सुराकी छ । तर यिनले त्यसको दोष अप्रत्यक्ष रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईउपर लगाएका थिए ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा फोरमका तर्फबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या गरियो । आमसभा एउटै स्थलमा भएपछि यसले मारामारको रुप लियो । यो हत्यामा कार्यक्रम स्थलबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई एक कि.मि. परसम्म लखेटेर मारियो । गोर्खादेखि भाग लिन पुगेका माओवादीका कार्यकर्ताहरू मारिएपछि नै हो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र उपेन्द्रलाई जेल हाल्नु पर्ने कुरा उठाए । यसमा पनि प्रचण्डभन्दा बाबुराम उपेन्द्रका बिरूद्ध उग्ररुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
बाबुराम भट्टराई देशप्रति इमानदारी भएका व्यक्ति होइनन् भन्ने वास्तविकता उनले पटकपटक व्यक्त गर्ने गरेका वाणीबाट पुष्टि हुन्छ । मधेश आन्दोलनका नाममा टीकापुरमा भएको नरसंहारभन्दा अगाडि उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्ने संकेत गरी भदौ २६ का दिन “मधेशी र विभिन्न जाति समुदायलाई अधिकार नदिए मुलुकलाई अखण्ड राख्न नसकिने” लेखेका थिए । यसको ब्यापक आलोचना भयो ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा ०६९ साउन १९ शुक्रबार केही पत्रकारसमक्ष यो पनि उनले भन्न बाँकी राखेका थिएनन्, “….खासमा यो मुलुकको चाबी अन्तै रहेछ, त्यसैले सोचेजस्तो गर्न नसकिने रहेछ ।……उत्तरको छिमेकी चीन हाम्रै जमानामा महाशक्ति राष्ट्र हुँदैछ । भारत पनि त्यसैगरी उन्नती गर्दैछ । बीचको यो नेपालले आफ्नो प्रगति गर्न सकेन भने एकातिर मर्ज हुनुपर्छ ।”
माओवादीमा एकै ठाउँ चुलोचौको भएका बेला बाबुरामलाई लेख्न जिम्मा दिइएको ए–नेकपा (माओवादी) को २०७० को ‘चुनावी प्रतिबद्धतापत्र’ (घोषणापत्र) को दोस्रो खण्डको बुँदा नं. ४.५ मा, ‘१८ वर्षभन्दा माथिका सबै स्वस्थ नागरिकहरूलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको ब्यवस्था गरिने’ (पृ. १५) भनी लेख्ने ‘नयाँ शक्ति’ का रचयिता यिनै बाबुराम हुन् । प्रतिबद्धतापत्रमा ‘इच्छुक नेपाली नागरिक’ वा यस्तै शब्दावली नभएर किटानीका साथ १८ वर्षमाथिका सबैले सैनिक तालिम ‘अनिवार्य’ रुपमा लिनैपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालमा १८ देखि २५ वर्ष बीचको उमेर समुहका युवा–युवतीको संख्या लगभग ७० लाखभन्दा माथि देखिन्छ । अनिवार्य सैनिक तालिममा यो गरिब मुलुकको खर्बौं रुपैयाँ उडाएर कसका बिरूद्ध लड्ने हो ? पाउने के हो ? बुझिनसक्नु छ । यो कुरा उनले २/४ दिन अगाडि पुनः दोहो¥याएर बोलेका थिए ।
भारतका पेशेवर अपराधी ल्याएर हत्या गरिएको भन्ने प्रचण्ड र बाबुरामको आरोप थियो । तर उपेन्द्र भन्छन्, “यो सब नरसंहारको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मोर्चाका ज्वाला सिंहले लिएकाले त्यस घटनामा फोरम दोषी छैन भन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा गौर घटना हामीबिरूद्धको षड्यन्त्र हो । फोरमलाई जनतान्त्रिकजस्तै हिंसामा उत्रिएको संगठन हो भनेर देखाउन र हामीलाई मूलधारबाट अलग्याउन त्यो घटना गराईयो” (नेपाल सा. ६ साउन २०६४, पृ. १५) । तर मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको रिपोर्टले भन्छ, यो घटना गराउनमा फोरम नै दोषी देखिन्छ ।
गौर नरसंहारबारे राजाका सैनिक सचिव रहिसकेका बिवेककुमार शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा यो घटना भारतले गराएको भनी सांकेतिक रुपमा लेखेका छन् । “…. भोलीपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो । गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हतास र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले मलाई ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ’ भन्नुभयो” (पृ. ८२–८३) ।
‘एक मधेश एक प्रदेश’ को असम्भव नारा लगाएर पञ्चतन्त्रको सोम शर्माको सातु व्यापारजस्तै उडन्ते कल्पनामा राजनीति चलाएका उपेन्द्र यादव घाटघाटको पानी पिउँदै मधेशी जनअधिकार फोरम नामको एउटा एनजीओ खोलेर त्यसैलाई पार्टी बनाएर यस्तो राजनीति गर्दैछन्, मानौं उनी यस अघि सत्तामा बसेकै थिएनन् । यसरी आफुमा दायित्वबोध नभएको जस्तो विद्रोही राजनीति चलाइरहेका छन् यी वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ।
०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको माघ १ गतेकै भाेिलपल्ट त्यसलाई माइतीघरमा जलाउने यिनकै पार्टी हो, मधेशी जनअधिकार फोरम । त्यो बेलासम्म उनको पार्टी कसैले वास्ता नगरेको एनजीओ जस्तै थियो । जब यिनले अन्तरिम संविधान जलाएर मधेश आन्दोलन तताए, मधेशमा आगो बाल्ने काम भयो । आखिर २०६४ मा अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई संघात्मक राज्य ब्यवस्थामा लैजाने भनी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित आधारातमा २२ सूत्रीय सम्झौता सरकारसँग भयो ।
त्यही वर्ष उनैले नेतृत्व गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सरकारले आठसूत्रीय सम्झौता ग¥यो । यी दुईटा सम्झौताले तराईमा यिनको व्यक्तित्व आकासियो । संविधानसभाको चुनावपछि ‘फोरम’ ५४ सभासदसहित सविधानसभाको चौथो शक्ति बनेको थियो । आज संसदमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ‘फोरम’ मा १६ सांसद छन् भने बाबुरामको नयाँ शक्तिका उनीमात्र सांसद हुन् ।
अध्ययनशीलता ५८ वर्षीय उपेन्द्र यादवको विशेषता हो । एक छोराका पिता उपेन्द्र संवेदनशिलतारहित, निरंकुश र एकलकाँटे निर्णयशैली भएको भनेर आलोचित उपेन्द्रका गतिविधिलाई लिएर सहकर्मीहरूबीच असन्तुष्टिको स्वर भने निकै गुन्जिरहन्छ । २०७२ बैशाखमा भूकम्पले एकथरि नेपालीको जीवन तहसनहस बनाएको मुहूर्तमा उनी विराटनगरमा आफ्नो छोराका राजशी ठाँटका साथ खर्चालु बिवाह गरिरहेका थिए । अर्कातिर रुखो, अब्यवहारिक र पाखण्डी स्वभावको बाबुरामसँग यिनको सम्बन्धले कसरी गति लिने हो, त्यो हेर्न पर्खिनै पर्छ ।
बाबुरामले नै भन्दै आएको ‘गौरवशाली पार्टी’ ले ‘महान जनयुद्ध’ ताका मृत्युको मुखमा पु¥याएका १८ हजार नागरिकको रगतका छिटा उनका मुखबाट पुछिएको छैन । जुनसुकै ‘शक्ति’ बनाए पनि र विदेशतिर जता ‘भक्ति’ देखाए पनि यो कलंकबाट उनी तबसम्म मुक्त हुने छैनन्, जबसम्म उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा कुनै न्यायिक निकायबाट सफाई पाउने छैनन् ।
#मधेशी जनअधिकार फोरम
#समाजवादी पार्टी नेपाल